Uzo mkpirisi kiiboodu nke Gnome-Shell | Site na Linux
Uzo mkpirisi kiiboodu nke Gnome-Shell
Gnome-Shell Ọ bụ ejiji, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ojiji ya n'ọtụtụ nkesa ga-adị n'oge dị mkpirikpi.
Dị ka oche ọ bụla dị mma, Gnome-Shell O nwekwara mkpirisi keyboard ya na ufodu ihe itunanya nke g’eme ka anyi gaa n’etiti Ụlọ na Overview (General Ozi, n'ihi ya, na-ekwu. Ọ bụ echiche ị na-enweta mgbe ị pịa Eme). Ya mere, ka anyi were ohere imata ufodu.
Igodo Windows: Gbanwee n'etiti ngwa ma ọ bụ desktọọpụ. Hazie windo mepere emepe ka ị wee hụ ha niile na Nlekọta ma họrọ nke ịchọrọ.
Alt F1: Gbanwee n'etiti Isi na Desktọpụ.
Alt F2: Ọsọ ndụ m niile.
Alt + Tab: Gbanwee n'etiti ngwa site na iji windo mmapụta.
Alt + Shift + Tab: Otu dika nke gara aga, ma ya na ngwa ndi ozo.
Alt + [Down Key + Tab]: Mgbe anyị mejupụtara nchikota a, egosiri otu ihe mana anyị nwere ike ịhụ windo windo ọ bụla nwere ngwa mepere emepe.
Ctrl + Alt + Tab: Mepee oghere nnweta.
Ctrl + Mgbanwe + Alt R: Dị nnọọ ukwuu. A Nchikota igodo anyị nwere ike ime a Screencast nke anyị na Desktọpụ. Anyị na-amalite ma mechie ya na otu nchikota.
Ctrl Alt Up / Ala Akụ: Gbanwee n'etiti desktọọpụ (yiri Compiz).
Ctrl + Alt Mgbanwe + Up / Down Arrow: Anyị na-akpali windo dị ugbu a na desktọọpụ dị iche.
Karịsịa nhọrọ ime Ihu nyocha Ọ dị ịtụnanya .. You nwere ike ịhụ ụzọ mkpirisi ndị a na nkọwa ha n'ime njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Uzo mkpirisi kiiboodu nke Gnome-Shell
na-agba ụta dijo
»Windows igodo»? WTF!?
Zaghachi Onye na-agba ụta
Kpọmkwem, dị ka Windows ọkọlọtọ na ọtụtụ keyboards na ụwa. Na Linux, igodo a makwaara dị ka Super ma ọ bụ Super L.
Ee, ama m, mana ọ dị ka igodo ahụ bụ nke Güindou $ (-.-). Ha kwesiri inweta kiiboodu site na Tux ma obu OS-tan (¬¬), ha ga eresị ndi ozo.
A na-akpọ ya igodo SUPER, abụghị windo.
Ebidola. Knowsnye maara igodo ahụ ma e wezụga anyị dị ka Super? Agbanyeghị na inwere ike ịchọta ederede ọrụ aka na blọọgụ a, echefula na ọtụtụ n’ime ha bụ maka ndị ọrụ ọhụụ ma ọ bụ ndị sitere na Windows. Ya mere daalụ nke ukwuu maka ndozi ahụ, mana ị jidere Windows igodo.
Eziokwu bụ na enwere m mmasị na Gnome-sheel oge m na-anwale Fedora 15. Ugbu a, m laghachiri na Mint na m ga-anwa Ubuntu Ocelote na obere oge, mana anaghị m ala azụ ịlaghachi na Fedora 16 nke na-abịarute.
Site n'ụzọ, Ahụtụbeghị m kọmputa na Linux arụnyere nso, ọ dị onye maara ihe akara igodo "super" dị na kiiboodu ndị ahụ?
N'ezie, echere m na Canonical na-ere ihe igodo ya na igodo Super site na iji akara Ubuntu, mana onweghi onye ọzọ chegoro idochi ya.
ebe obibi ndị mọnk cergio dijo
windo bụ windo na bekee nke ahụ bụ windo windo ihe ngosi ahụ impreo na igodo ahụ na pasent nke keyboard bụ akara nke maicrosof entoses etu m chọrọ ka ọ kpọọ igodo, ọ dị ka achọrọ m ịchọta aha ọzọ maka igodo ahụ; a na-akpọ desir ñ maka na kiiboodu bekee igodo na-ede leta ñ
Zaghachi monastery nke cergio
Kedu ihe ị ga - eme ka Zarafa ghara ijikwa nnyefe nke ozi ịntanetị na Zentyal?